Las Vegas ဇီပ်
မေးခွန်း Las Vegas ဇီပ်
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #769 by dogtrack
မင်္ဂလာပါ3ကွဲပြားခြားနားသော PC များ (4.05GB ထုပ်ပိုး) ရက်နေ့တွင် LV ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါပွီ။ Winrar သုံးက 6x.tiz ဖိုင်တွေပေါင်း 1x.exe ဖိုင်အထုပ်ပျက်ကွက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဥပမာအားဖြင့်ထဲမှာ archive အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်သို့မဟုတ်အမည်မသိဖိုင်အမျိုးအစားများပါဝင်သည်ဟု။ အခြား unzipper ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ပါ့မလား သို့ဆိုလျှင်အရာတစျခု, ကျေးဇူးပြု. ?
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #770 by Dariussssss
မင်္ဂလာပါနှင့် Rikoooo မှကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ဤအောက်မှာ post ကျေးဇူးပြုပြီးရနိုင်ပါသလား FSX,FSX ရေနွေးငွေ့ခွဲဖိုရမ်တွင်? ဤသည်အထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်သူတို့ကိုယ်သူတို့မိတ်ဆက် Rikoooo ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #772 by dogtrack
2 နှစ်ပေါင်း5months ago -2နှစ်ပေါင်း5months ago #773 by rikoooo
ငါထိထိရောက်ရောက်လည်းဤပြဿနာကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီ, ငါက Izarc အသုံးပြု. ဖြေရှင်းနိုင်တယ်:
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Izarc Download လုပ်ပြီး install www.izarc.org/ ထို့နောက် archive ကိုပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီး "Izarc" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် "las_vegas_mega_photoreal_scenery မှ Extract"
ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုများအတွက် fixed ပါလိမ့်မည်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာဒါ I'am ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Rikoooo အားအသစ်သော archive ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်း။
အဆင်မပြေမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်, ကကြီးမားတဲ့ file တွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူမယ့်,
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း5months ago နေဖြင့် rikoooo.
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: dogtrack
0.259 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်